Al-Shabaab oo weerartay saldhig kale oo ciidamada ATMIS ku leeyihiin Sh/dhexe | Allbanaadir.com
Home NEWS Al-Shabaab oo weerartay saldhig kale oo ciidamada ATMIS ku leeyihiin Sh/dhexe
Al-Shabaab oo weerartay saldhig kale oo ciidamada ATMIS ku leeyihiin Sh/dhexe
Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ayaa tiro madaafiic ah ku weeraray saldhig ciidamada ATMIS ku leeyihiin degaanka Miir-taqwo oo u dhow degaanka Ceelbaraf ee gobolka Sh/dhexe.
Goob joogayaal ayaa sheegay inay madaafiic dhowr ah ku soo dhaceen degaanka, hase yeeshee aysan ogaan karin khasaaraha ka dhashay.
Ciidamada Midowga Afrika ee ATMIS ayay wararku sheegayaan iney dhankooda Madaafiic kale ku jawaaben, kuwaasoo ay la beegsadeen duleedka degaanka Ceel-baraf oo ay tuhunsanaayeen in laga soo duqeeyey.
Khasaaraha ka dhashay madaafiicda labada dhinac isweydaarsadeen weli ma cadda, hase ahaatee weerarkan ayaa ku soo aaday xilli maalmo ka hor ay Al-Shabaab weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen Saldhiga Ciidamada ATMIS ee degaanka Ceelbaraf, kaasoo geystay dhimasho iyo dhaawac oo gaaray ciidamo ka socday Burundi.
Previous articlePress Statement of the 1081st meeting of the PSC on the attack by Al Shabaab against a Forward Operating Base (FOB) of the AU Transition Mission in Somalia (ATMIS) in Middle Shabele region, south west of Mogadishu, on 3 May 2022
Next articleSiyaasiga C/qaadir Jaahweyn oo ku dhawaaqay inuu u sharaxan yahay Madaxweynaha Somalia